Turkiga oo dajiyey Qorshe la dagaalanka Argagaxisada & Amniga Ankara oo si weyn loo adkeeyey - iftineducation.com
iftineducation.com – Xukuumada Turkiga ayaa xalay (Sabti) ku dhawaaqday inay bilaabeyso qorshe cusub oo ay kula dagaalameyso kooxaha argagaxisada ee doonaya inay khal khal geliyaan amniga dalkaasi sida uu sheegay Raysalwasaaraha Turkiga.
Raysalwasaare Ahmet Davutoglu oo xalay shir gaar ah la yeeshay hay’adaha amaanka ee wadanka Turkiga ayaa shirkaasi kadib shaaciyey qorshaha cusub oo uu sheegay in wax weyn ka bedali doonto xaalada amni ee dalkaasi, isla markaana u sheegay shacabka Turkida inay magaalooyinka waaweyn ku arki doonaan ciidamo badan oo hawlgaladooda sare loo qaadayo.
Tilaabadan ayuu Raysalwasaaraha sheegay in ay kusoo afjarayaan kooxaha doonaya inay shacabka Turkida ku cabsi geliyaan weerarada argagaxsida oo ay ugu danbeeyey weerarkii Arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay caasimada Ankara oo ay ku dhinteen 28 qof.
Magaalada Ankara ayaa hada lagu arkayaa goobaha dadka lagu baaro iyo ciidamo dheeraad ah oo sugaya amaanka.
Ahmet Davutoglu ayaa dhinaca kale beeniyey kooxdii sheegatay weerarkii Ankara oo lagu magacaabo TAK oo ah farac yar oo horey uga go’ay jabhada PKK ee kurdida ka dagaalanta Turkiga.
Balse Raysalwaraaha ayaa sheegay in weerarkan ay fuliyeen kooxda YPD ee kurdida Siiriya, wuxuuna intaasi raaciyey in kurdida dhexdeeda ku heshiisay in qaraxaasi ay sheegato kooxdan yar ee TAK si markaasi loo illaaliyo Sumcada jamhada YPD ay ku leedahay beesha caalamka.
Turkiga ayaa sheegay inuu sii wadi doono la dagaalanka Jamhada YPD ee Kurdida Siiriya kuwaasi oo dhinaca kale taageero ka hela dalalka reer Galbeedka sida Maraykanka oo u arka kooxdaasi YPD mid qeyb weyn ka qaadan karta la dagaalanka kooxda ISIS / Daacish.
gabar facebook lagu bikro jabiyay daawo